Kungakhathaliseki ukuthi unesizotha kanjani umlingisi waseHollywood osemncane, owenza umsebenzi wakhe kancane kancane ukuba ahambe ngemva kokuvumelanisa kahle "uDeveli Ubeka Prada", akayona intombazane nhlobo.
Ungaba nomqondo olula futhi okhuthele njengokuthi "UDeveli uhlala ePrada", othakazelisayo futhi ongenasisekelo njengoba "ku-Brokeback Mountain", e-ethereal ne-airy njengase-"Alice ku-Wonderland", enengqondo njengokuthi "ku-Jane Austen", kodwa akafane neze. Futhi uma, njengokubheka, ku-Angelina Jolie, ngisho nasezinkampanini eziyinkimbinkimbi, akunakwenzeka ukuba ungabonakali esithombeni esidumile, ngakho-ke izinto ze-Anne Hathaway zihluke ngokuphelele. Kungenza abantu bakholelwe ukuthi banomlingani obalulekile, ophilayo. Akumangalisi ngonyaka odlule ukuthi ubuciko bokusebenza beHathaway buchaza esinye sezibukeli ezikhangayo kunazo zonke emhlabeni - Oscar "abafundi", behlonipha ukuphakanyiswa kwakhe komklomelo omkhulu wefilimu ngendima yakhe emlandweni we "Rachel Marries." Kulo, u-Anne wadlala intombazane eyachitha iminyaka eminingi emitholampilo yokuvuselela, futhi yanquma ukuza emshadweni kodadewabo ngethemba lokusungula ubudlelwane bomndeni.
Umqondisi we-Princess Diaries, uHarry Marshall, owanikeza u-Anne ithikithi e-movie enkulu, uthe uhlanganisa uJulia Roberts, u-Audrey Hepburn noJudy Garland. Le ntombazane inomzimba omuhle: umama wakhe ungumdlali wezemidlalo, kanti uHathaway uzizwa engokwemvelo kokubili esiteji ngaphansi kokukhanya kwezinsipho kanye nokubekwa kwe-movie. Kwaphela iminyaka eyisithupha, iHollywood yawa ezinyaweni zika-Anne: yabonwa ngenkathi esebenza eKarnegie Hall , umenywe ochungechungeni ethi "Yiba ngokwakho", bese usesithombeni. Umdlali we-actress waqala umkhuba wokushintsha imisebenzi ebalulekile ngokuhlekisa. Kusukela kwamanye amafilimu angamletha impumelelo yakhe, yena wenqaba ngisho - isibonelo, kusukela kunendima ethi "I-Phantom ye-Opera."
Uthando nezinye izidakamizwa?
Ifilimu entsha ka-Ann ethi "Uthando Nezinye Izidakamizwa" idutshulwa ngesihluthulelo esivamile sokuthandana, kodwa ngezici ezithile ezikhethekile. Umdlali we-actress uyavuma ukuthi emva kokuphakanyiswa kwe "Oscar" kwaba lula ngaye ukuthola iskripthi esihle kakhulu. "Ngokuvamile e-movie kanje, izenzakalo ziyakhula ngendlela efanayo: kuqala amaqhawe atholakala othandweni, abashada, kahle, endaweni ethile phakathi, kukhona ubulili nabo. Nakhu konke okunye okuzungezile, okuyinto ngokuzenzakalelayo kwenza le ndaba ingavamile futhi ingokoqobo. Ngiyazi abantu abaqala ukuya ocansini, bese bathandana, "Amasheya eHathaway. U-heroine wakhe uMaggie uyintombazane encane enekhono elibhekene nesifo sikaParkinson. Akafuni ukugwaza nanoma ubani aze ahlangane nomdayisi weJamie Viagra, odlalwa nguJake Gyllenhaal. "Esikhathini seqoqo elithi" Brokeback Mountain, "mina noJake sasebenza amasonto amabili kuphela, futhi lesi sikhathi sachitha izinyanga ezimbalwa ndawonye. UJake unendlela ehlukile - ulungiselelwe kahle, kodwa uthanda ukuhleka usulu phakathi kokubili. Ekuqaleni, kwakungamahloni, kodwa uJakekubed, ukuthi ekudubula ungakhululeka kakhulu. Ngabona ukuthi ungaba nesikhathi esihle esakhiweni, futhi uma ngiphulukisa kakhulu, "imithi" phakathi kwamaqhawe ethu kubonakala ngokwengeziwe ". I-heroine ka-Anne ayinakwenzeka. "Ngikhuluma nabantu abahlukunyezwa yisifo sikaParkinson," usho kanje. - Ngacabanga ngalokhu isikhathi eside futhi ngaxoxa ngakho nomqondisi u-Edward Zwick futhi ekugcineni nganquma ukugxila ekuphikeleni isimo sami sobuqhawe, ngoba iningi labantu abasha liyathatha impilo futhi lenze izinto eziningi kalula. Ngokwesibonelo, ikhono lokubopha izinhlanzi. Kwabanye abantu, ezindaweni ezithile akunakwenzeka, nakomuntu ngisho naphakade. Uma uhlangabezana nesifo sikaParkinson, unezinsuku ezinhle nezinsuku ezimbi, yilokho esikhuluma ngakho kwifilimu yethu.
Izimfihlo zomuntu ezenzakalelayo
U-Anne, ngokungafani nezinye izinkanyezi eziningi, akalokothi axoshe ukuqina okukhulu.
Iqiniso elidumile lokuthi i-Hathaway ingumlimi wezitshalo: "Ngasekupheleni kwehlobo, ngesikhathi ngidutshulwa eNgilandi, ngavele ngayeka ukufuna ukudla, nakuba ngangisadla izinhlanzi. Ngabe ngifunda incwadi kaJonathan Safran Foer ethi" Ukudla Izilwane "futhi kusukela ngaleso sikhathi uye naye. Ngineluleka ukuba ufunde le ncwadi futhi, kodwa ugcine engqondweni - iyoshintsha impilo yakho! "Ukuphila kuka-Anne ngaphandle kwesikrini kuyinto evamile kakhulu:" Manje ngakha indlu yami. Ngifunda ukudlala isiginci nokupheka. Ngithanda ukuhamba futhi ngichitha isikhathi nabangani, ngenza usizo. Nginomqondo ojulile, ngifunde okuningi, nansi, isibonelo, incwadi mayelana nezintambo zezintambo futhi ngesikhathi esifanayo indaba ye-Showday Night Live. " Uthanda ukungakhulumi ngobudlelwane, kodwa i-paparazziregulyarno isusa nesoka lakhe u-Adam Schulman. Futhi lokhu kuyaqondakala: ukuthungathwa kobugebengu noRafaello Folliery, owayengumqambimanga, ungumculi ofuna ukugcina impilo yakhe yangasese imfihlo.
The biography of umlingisi uPatrick Swayze
UTina Kandelaki, ungubani?
UGrace Kelly: Indaba Yenkosikazi
U-Ukraine Ukraine - uKsenia Kuzmenko
I-ex-soloists ye-VIA Gra
Indlela yokulungisa ukuma
I-Horoscope yoNyaka Omusha, izikali
Kungani umyeni wakhe engafuni ucansi ngemva kokubeletha?
UKsenia Borodina okokuqala uvume ukuthi uhlukanisile noKurban Omarov
Isaladi nge-crab inyama
Indlela yokuthola abangane abalungile nabangane abaningi
Indlela yokunakekela i-wig yemvelo?